मिलेर गरौं, चुनौतीपूर्ण समयको सामना: सहकारी कथा
सोमबार, फागुन २४
अध्यक्षः आजको बैठकमा अर्ध बार्षिक समीक्षा गरियो, नियमित एजेण्डामा छलफल भयो, अघिल्लो महिनाका खर्च अनुमोदन गरियो, तोकेको लक्ष्य पूरा भएको छैन, कोभिड १९ को माहामारीबाट भर्खर हाम्रा सदस्यहरु सामान्य अवस्थामा फर्किदै छन । ब्यवसाय निरंन्तरता अबको चुनौतीपूर्ण बिषय हो । यो बेला हामी के गर्न सक्छौ केही नयाँ सोच्न सक्छौ कि !
सचिवः हो, हामीले यो समय केही सोच्नु पर्छ, सदस्यहरु अफ्ठ्यारोमा छन् ।
व्यवस्थापकः हामीले सधै सदस्यको हितमा काम गर्ने गरेका छौ । यो महामारीमा ब्याज छुटं र सहुलिय ब्याज दरमा पुनरकर्जा प्रदान ग¥र्यौ । यी कामले सदस्यलाई थोरै भएपनि राहत प्रदान गरेको छ ।
अध्यक्षः हो, यी कामले सदस्यको क्षणिक समस्यालाई राहत मिलेको थियो । लामो समय महामारीमा फसेका सदस्यलाई अब लामो रुपमा राहत दिने योजनाहरु ल्याउनु पर्छ ।
कोषाध्यक्षः ब्याजदरमा केही राहत दिन सक्छौं कि !
ब्यबस्थापकः ब्याजदर त अहिले घटेको छ । लगानीमा १४.७५ प्रतिशत मात्र लिन मिल्छ र न्यून जति पनि गर्न सकिन्छ । आवधिक बचतको ब्याज बढी छ यो भन्दा पहिले लिएकोमा यो अबस्थामा बेसरेट हेरेर योजना ल्याउनु पर्छ ।
अध्यक्षः आज सम्मको कारोबारमा जे छ त्यस्लाई मिलाउदै जानुपर्छ आधार दर पनि हेरौ, यो पटक मुनाफा आर्जन गर्न सकेनौ भने केही छैन, भावी योजनाहरु सदस्य मैत्री बनाउनुपर्छ ।
संचालकः बजारको अवस्था हेरांै, सदस्यको व्यावसायिक अबस्था बारे अध्यन गरौँ र केही थप नयाँ योजना बनाऔं ।
अध्यक्षः हामी सबैको चाहना संस्था मार्फत सदस्यको आर्थिक उन्नति हो । यसका लागि काम आवश्यक छ । अब सदस्यहरुलाई उद्यमशील बनाउन जरुरी छ । साना उद्योेगहरु सञ्चालन गर्न प्रेरित गरांै । महिला सदस्यको हकमा उद्यम गर्नका लागि तालिम तथा बजेटको ब्यवस्था संस्थामार्फत गरौ ।
कोषाध्यक्ष ः महिला उद्यमी बनेर देखाउ, आत्म निर्भर भएर बाचौं भन्ने हाम्रो नारालाई अझै सफल बनाउन भावी योजनाहरु उद्यमसँग जोड्ने बनाउनु पर्छ ।
सचिवः यो वर्षको नारी दिवस फागुन २४ गते परेको छ र हामीले सधै विविध कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेका थियौ । यसपटक केही नवीन गर्न सकिन्छ ?
लेखा समिती संयोजकः के फरक गर्ने त ! हाम्रा महिला सदस्यको भेला गराऔं र साना उद्योग बारे छलफल गरौ । उद्यमशिलता बारे कुरा गरौं । आवश्यक लगानी बारे छलफल गरौं, कसो ?
अध्यक्षः मलाई चित्त बुझ्यो । यो वर्षको नारी दिवस हामी सदस्यको साथमा मनाऔं । यस बारे व्यवस्थापकले कर्मचारीहरुलाई जानकारी गराइ आवश्यक काममा संलग्न गराउँदा उचित हुन्छ । सचिवमार्फत सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ । आधार दर हेरी यो बेला सदस्यहरूलाई जति सहज र सुलभ सेवा दिन सक्छौ दिउ ।
हामी सबै कार्यक्रमको तयारीमा लागांै र कस्तो खालको साना उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ यस बारे थप खोजी गरौ ।
सबै जना सहमत भयौ ।
सहकारीले आफ्नो सदस्यको जीवनस्तर परिवर्तन ल्याउन र समय अनुसार चल्न यीमध्ये केही कामहरू सुरु गर्न जरुरी छ । मिलेर गरौं, चुनौतीपूर्ण समयको सामना । सदस्यहरुलाई अभिभावक संस्था भन्ने भरोसा दिलाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।